Suldaan Cali Baane oo ka Hadlay Natiijada Shirkii London | Somaliland.Org
Suldaan Cali Baane oo ka Hadlay Natiijada Shirkii London
February 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.org)-Suldaan Cali Cabdillaahi Baane ayaa maanta ka hadlay sida uu u taageersan yahay natiijada ka soo baxday shirkii London oo uu tilmaamay in ay tahay guul u soo hoyatey Somaliland.
Suldaaanku waxa uu ku hambalyeeyay xukuumada tallaabadii kalsoonida laheyd ee ay kaga qeybgashay shirkii London, taasi oo uu xusay inuu Ilaahey ku guuleeyay oo ay keentay in lagu aqoonsado baahida loo qabo in ay wada hadlaan Somaliland iyo hadba ciddii kale ee ka joogta Soomaaliya.
Suldaan Baane waxa uu sheegay in ay jiraan arrimo badan oo u baahan in la kala guro maadaama ay ahaayeen labada dhinac muddo dheer dawlad keliya oo ay wax badani soo dhexmareen dhaqaale hanta guurta iyio mid kaleba iyo siyaasadba.
“Somaliland iyo Soomaaliya oo isu tegay lixdankii waxa ay muddo dheer soo ahaayeen dawlad keliya oo wax walba wadaagta, haddey tahay siyaasad iyo dhaqaalaba, waxa dhex taallley hanti badan oo leh ma guurto iyo guurtaba. Sidaa awgeed waxa lagama maarmaan ah in la helo habkii iyo sidii loo kala guri lahaa, waxaana dabcan fure u ah wada hadal. Waxa Ilaahay mahadii ah manta haddii adduunkii aqoonsadey in aynu nahay laba dal oo u baahan in ay u wada hadlaan laba dhinac.Taasina waxa keenay tallaabadii dhiiraneyd ee ay qaadey xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo.
Haddaan wax ka xuso hantidaaasi waxa ka mid ahaa adduunkii yaaley baananka, deymihii, gaaadiidkii badda iyo cirka iyo dhismayaal badan oo ay ku laheyd dawladdi waqtigaasi safaaradihii dibadda.
Waxa jirey iyana heshiisyo badan oo caalami ahaa, waxyaabahaasi oo dhami waxa ay u baahan yihiin in lagu kala baxo. Sida hore uga dhacday dawladihii kala noqdey oo ay dhexmareen heshiisyo lagu dhex joogey oo ay ku kala baxeen, dawladahaasi waxa u dambeeyay Labada Suudaan, Itoobiya, Erteriya iyo kuwo kale oo badan oo soo marey taariikhda.”
Suldaan Baane waxa kale oo uu ku hambalyeey guushaasi guud ahaan shacabka Somaliland sida ay u wada taageereen mucaarid iyo muxaafidba.
“ Sida aan qabo shirkani waxa uu soo afjarey ka maqnaanshihii kulamo badan oo dibada ahaa oo rag dibad meer ahi sheegan jireen magaca Somaliland, waxaanan qabaa in aan mar walba tagno goob kasta oo arrimaheenna lagaga hadlayo oo aan ka caddeynaa goob kasta iyo waqti kasta mowqifkeenna madaxbannaanida iyo inaan nahay dal gaar ah oo aan gorgortan geli karin”, ayuu yidhi Suldaan Cali Baane.
Previous PostSomaliland Shirka London Maxaa Uga Soo Baxay?Next PostM/weynaha Oo Ka Hadlay waxa Uu Noqon Doono Wada Hadalka Dhex Mari Doona Somaliland Iyo Somalia	Blog